AKHRISO: Mashaariicda Sacuudiga ee mowqifkii arrinta Qatar u xayirmay | Arrimaha Bulshada
Home News AKHRISO: Mashaariicda Sacuudiga ee mowqifkii arrinta Qatar u xayirmay
AKHRISO: Mashaariicda Sacuudiga ee mowqifkii arrinta Qatar u xayirmay
Bulsha:- Dowladda Soomaaliya ayaa diyaarisay mashaariic fara badan oo Boqortooyada Sacuudiga ay maalgelin doonto.
Arrintan ayaa ka dambeysay markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo uu socdaalkiisii ugu horeeyay ku tegay Sacuudiga, isagoo codsaday in dowladiisa la siiyo lacag dhan 4 Bilyan oo Doolar.
Boqorka Sacuudiga Salmaan Bin C/Casiis ayaa amar ku bixiyay in Soomaaliya laga taageerayo baahida ay qabto, iyadoo markaas kadib laga dalbaday inay dowladda Soomaaliya la timaado mashaariicdii loo maalgelin lahaa.
Xukuumadda Soomaaliya ayay ku qaadatay 2 bilood inay diyaariso qorsheynta mashaariicda la horgeynayo Sacuudiga, iyadoo ugu danbeyn wafdi ka kooban lix wasiir ay qorshahaasi geeyeen Sacuudiga.
Guddi ka socda Hay’adaha Saccuudiga ayaa qaabilay Wafdiga Wasiirada Soomaalida oo u sharxay mashaariicda ay doonayaan in Sacuudiga maalgeliyo.
Mashaariicda waxaa ka mida:
Dhismaha Garoon Diyaaradeed Caalami ah – Duleedka Muqdisho
Dhismaha xarun cusub oo Madaxtooyada Soomaaliya – Duleedka Muqdisho
Dhismaha Wado ilaa 230 KM
Dhisme iyo dayactir ilaa 6 Dekadood
Dib u howlgelinta Shirkadii Diyaaradaha Somali Airlines iyo diyaarado la siinayo
Mashaariic horumainta Beeraha iyo Xoolaha
Mashaariic shaqo abuur
Sacuudiga ayaa dib u eegaya qorshahan, waxaana la sheegay in heshiisyada labada dal lagu saxiixi doono kulan heer sare ah oo madaxda labada dal ay isugu imaan doonaan.
Arrimahan oo dhan waxaa mugdi geliyay mowqifka ay dowladda Soomaaliya ka qaadatay xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex taagan Dalalka uu Sacuudigu hoggaaminayo ee Khaliijka iyo Qatar.
Dowladda Soomaaliya ayaa mowqfi dhexdhexaad ah ka qaadatay khilaafka Sacuudiga iyo Imaaraadka kala dhaxeeya dalka Qatar, waxaana Muqdisho yimid La-taliyaha Boqorka Sacuudiga Axmed Al-khadiib, iyadoo madaxweyne Farmaajo ku adkeystay mowqifkiisa.
Waxaa laga cabsi qabaa in lacag gaareysa 50 Milyan oo Doolar oo Sacuudigu u siiyay Soomaaliya kabka miisaaniyadda iyo maalgelinta dhan 4 Bilyan oo Doolar lagu waayo mowqifka Soomaaliya ka qaadatay xaaladda ka taagan Khaliijka, taasoo bedelkeeda aan la ogeyn waxa uu noqon doono.
Isha Warka Goobjooge.com